Bonke abaMongameli abatsha baxhaswe ngokutsha malunga ne-FDR's Desed First Days Days
Ukubeka izinto eziphambili kwikota yokuqala ngo-1933 kwakulula kuMongameli Franklin D. Roosevelt . Kwakudingeka ukuba asindise iMelika kwiinkcitho zezoqoqosho. Kwakudingeka ukuba aqale ukusikhupha kwi-Depression yethu enkulu. Wenza oko, kwaye wakwenza ngexesha lento eyaziwayo ngoku "njengeNtsuku Zasekuqaleni" kwiofisi.
Ngosuku lwakhe lokuqala, ngo-Matshi 4, 1933, i-FDR ibiza iCongress kwiseshoni ekhethekileyo. Emva koko waqhuba ulandelelwano lweelwayo ngokusebenzisa inkqubo yowiso - mthetho eyashintsha imboni yasebhanki yase-US, igcinwe ezolimo zaseMelika kwaye yavunyelwa ukubuyiswa kwamashishini.
Ngelo xesha, i-FDR isebenzise umyalelo olawulayo ekudaleni i-Conservation Corps, i-Public Works Administration kunye ne-Tennessee Valley Authority. Ezi projekthi zibeka amashumi amawaka aseMelika abuyele emadameni ekwakhiwa komsebenzi, amabhuloho, iindlela ezinkulu kunye neenkqubo ezifunekayo zoluntu.
Ngexesha iCongress yachitha iseshoni ekhethekileyo ngoJuni 16, 1933, i-ajenda kaRoosevelt, "iSatifikethi esitsha," sasisendaweni. I-America, nangona iqhubekile, yayisemkhatsini kunye nasemva ekulweni.
Enyanisweni, impumelelo yeeNtsuku ezili-100 zokuqala zikaRovelvelt yanikela ubungqina kwizinto ezibizwa ngokuba "ngumbongameli wezobuphathiswa" bobuongameli, obona ukuba uMongameli waseMerika unelungelo, ukuba akunjalo umsebenzi, ukuba enze nayiphi na idilesi efanelekileyo kwiimfuno Abantu baseMelika, ngaphakathi kwemida yoMgaqo-siseko kunye nomthetho.
Akusiyo yonke iNtsebenzo Entsha esebenzayo kwaye ithathe iMfazwe Yehlabathi II ekugqibeleni iqinise umnotho wesizwe.
Kodwa, nanamhlanje, amaMerika asebeqala ukulinganisa ukusebenza kokuqala kwabo bonke abaongameli abatsha ngokumelene "neentsuku ezilikhulu zokuqala" zikaFranklin D. Roosevelt.
Ngexesha leentsuku ezilikhulu zokuqala, bonke abaMongameli abatsha baseUnited States bazama ukubamba amandla e-carryover yephulo eliyimpumelelo ngokubhekiselele ekuphunyezweni iinkqubo eziphambili kunye nezithembiso ezivela kwiimfuno zokuqala kunye neengxoxo.
I-So-Called 'Honeymoon Period'
Ngexesha elithile inxalenye yeentsuku zokuqala eziliqela, iCongress, i-press, kunye nabanye abantu baseMerika ngokubanzi bavumela abaongameli abatsha "ixesha lokutshatyalaliswa kwentsholongwane," apho ukugxeka koluntu kubanjwe ubuncinci. Ngethuba leli xesha elingenasiphelo eliqhelekileyo nelisoloko lithemba abaongameli abatsha bazama ukufumana iindleko ngeCongress ezingase zijongane nenkcaso ngakumbi emva kwexesha.
Owesibini-okanye-wokuqala weeNkulungwane zokuQala zokuqala zikaGeorge W. Bush
Emva kokuvulwa kwakhe ngoJanuwari 20, 2001, uMongameli uGeorge W. Bush wasebenzisa yokuqala yesithathu yeentsuku zakhe zokuqala eziyi-100 ngokuthi:
Ukuzifumana yena kunye nabazuzi bakhe ukuphakanyiswa kwimivuzo yomongameli- ukuya kuma-400 000 e-$ ngonyaka-njengoko kuvunywe yiNgqungquthela kwiintsuku zokugqibela zeseshoni yokugqibela;
Ukuvuselela umgaqo-dolophu waseMexico ukukhanyela uncedo lwe-US kumazwe adlulisela isisu njengendlela yokucwangcisa intsapho;
Ukuzisa i-Congress ye-$ 1.6 trillion program yokusika intela;
Ukuqalisa isicwangciso sokuQinisekisa ukholo "esekelwe" ekuncedeni amaqela ezinikelo zengingqi;
Ukuqalisa "Inkululeko Entsha" yokuqalisa ukunceda abakhubazekile baseMerika;
Ukuzalisa iKhabhinethi yakhe kubandakanywa ukuqokwa kukaJohn Ashcroft njengeGqwetha eliPhezulu;
Ukwamukela isivakashi sokudubula iindwendwe kwi-White House;
Ukuqalisa ukuhlaselwa kweengqungquthela zomoya ngokulwa nokwandisa iinkqubo zokhuseleko zomoya zakwa-Iraq.
Ukuthatha kwimibutho emikhulu yabasebenzi kwi-contracting karhulumente; kwaye
Ukufumanisa ukuba i-Agent ye-FBI isenokuchitha iminyaka ihlola iRashiya.
Ngoko, ngelixa kwakungekho ziThutho ezintsha okanye ukuguqulwa kwamashishini, iintsuku ezingama-30 zokuqala kukaMongameli uGeorge W. Bush zazingekho kwiindawo ezingenakwenzeka. Enyanisweni, imbali iya kubonisa ukuba ininzi yeeminyaka ezisi-8 e-ofisi iya kulawulwa ngokubhekiselele ekuhambeni kweSeptemba 11, 2001 ukuhlaselwa kwesibetho nje kwenyanga e-9 emva kokuvulwa kwakhe.
I-Polar Express nguChris Van Allsburg
Yintoni iMolulla Oblongata?